बनेपामा श्रीमती-छोरा ह’त्याको मुख्य कारण: आर्थिक र यौन – मिलिजुली खबर
in अपराध, गृहपृष्ठ, फिचर, समाचार, समाज
काभ्रेको पाचँखाल नगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थायी घर भई हाल बनेपामा डेरा गरी बस्ने ३२ वर्षीय माधव उपाध्याय घिमिरेले आफ्नै छोरा र श्रीमतीको ह’त्या गरे । असार ३ गते माधवले आफ्नै श्रीमती ३० बर्षीय मनिषा कार्की (घिमिरे) र ६ वर्षीय छोरा युआन घिमिरेको ह’त्या गरेका थिए ।
माधवलाई अहिले प्र’हरीले प’क्राउ गरेर अ’नुसन्धान गरिरहेको छ । ह’त्याको मुख्य कारण आर्थिक र यौन नै रहेको प्र हरीसंगको प्रारम्भिक ब यानमा माधवले भनेका छन् ।
मृ’तक मनिषाको माईती देश भारत आसाम हो । ७ बर्ष अघि माधव र मनिषा बिवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए । छोरा युआन घिमिरेको जन्म भएपछि काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित तिनदोबाटोमा अल.इन.वान फेन्सी पसल खोली व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको आएका थिए । माधवले ६ बर्षीय छोराको पनि ह’त्या गरेका छन् ।
प्र’हरीको प्रारम्भिक अ’नुसन्धानमा माधवले यसो भनेका छन्:
श्रीमती मनिषाले मेरो अन्य महिलासंगको अनैतिक सम्बन्ध रहेको कुरा थाहा पाईन् । त्यसपछि मलाई किन धोका दिएको ? म घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै यस्तो क्रियाकलाप किन गरेको ? भन्दै यस्ता अनैतिक काम नगर्न बारम्बार अनुरोध गरी सचेत गराई रहन्थिन् ।
व्यापार व्यबसायमा ध्यान नदिएको । जग्गा जमिन किन्न नसकेको । घर बनाउन नसकेको, छोराको र परिवारको भबिष्यको बारेमा कुनै ध्यान नदिएको भनि श्रीमतीले आर्थिक कारोबारमा समेत बिवाद गरिरहन्थिन् ।
कसरी भयो ह’त्या
माधवले श्रीमती र छोरा निदाई रहेको मौका छोपे र सुरूमा श्रीमतीलाई सिरानीले मुख थुनी बलपूर्वक ह त्या गरे । त्यसपछि छोरालाई पनि त्यहि तरीकाले ह त्या गरे ।
श्रीमती र छोराको ह त्यापछि एउटै खाटमा सुताई ब्याङकेटले छोपे । कोठाको ताल्चा बाहिरबाट लगाई एक दिन सम्म घट’ना लुकाई राखे । घट’नालाई लुकाउन अनेकौ योजना बनाए ।
ह’त्या भएको यसरी पत्ता लाग्यो
श्रीमती र छोराको ह त्या गरेर एकदिनसम्म लुकाउन सफल भएका माधवको असामान्य गतिविधि छिमेकीले पत्ता पाए । छोरा र श्रीमती नदेखिनु र माधवको शं कास्पद ब्यवहार देखिपछि छिमेकीले प्र हरीलाई खवर गरे ।
जानकारी पाउनसाथ घटना स्थल पुगेको ईलाका प्र हरी कार्यालय बानेपाको टोलीले माधवलाई प क्राउ गर्यो । अहिले जिल्ला प्र हरी कार्यालय र ईप्रका बनेपाको संयुक्त अ नुसन्धान टोलीले अ नुसन्धान गरिरहेको छ ।
माधव अबैध आर्थिक कारोबारमा समेत संलग्न रहेको पाएको छ । माधवले प्रयोग गरेको विभिन्न विद्युतीय डिभाईसहरू निशयन्त्रणमा लिएर अध्ययन भैरहेको प्र हरीले जनाएको छ ।
काभ्रेकी देवीमाया तामाङ ८ बर्षपछि प'क्राउ